QABYAALADI QARAN MA DHASHO..​Cumar Cumar Cali | Togdheer News Network
QABYAALADI QARAN MA DHASHO..​Cumar Cumar Cali
Bulshooyinka horumaray haddii ay helaan jaanis ay ku doortaan ciddii hogaamin la hayd, waxay u tahay fursad dahabi ah oo mar mar iyo dhif uun soo marta, iyaguna iskama dayacaan ee si-fiican ayay uga faa’iidaystaan, waxaanay ku gaadhaan yoolka iyo himilooyinka ay leeyihiin.
Hadaba inagu ma nahay Ummad ku baraarugsan ka faa’iidaysiga fursadaha dahabiga ah ee soo mara xiliyada doorashooyinku dhacayaan.?
Bulshadeenu ma dareensan tahay in ay gacantooda ku jirto ciddii ay ku aamini la haayeen masiirkooda siyaasadeed iyo meesha aynu geediga u rarayaan.? Haddii aynu nahay reer S/land ma garwaaqsan-nahay baahida aynu u qabo dhisashada hanaan Dawladeed oo xoogan, kaa soo ka shaqeeya danaha iyo daryeelka bulshadiisa.
Sideedaba Dawladnimadu waxay ka bilaabantaa afar tiir oo laysku geeyay ku waa soo kala ah;- Masgaxda, Maalka, Muruqa iyo Aqoonta, haddii intaasi iskaashadaan islamarkaana loo sameeyo Qorshe cad iyo Nidaam maamul oo isu dheelitiran waa hubaal in lagu liibaanayo.
Dawladnimadu waxay mihiim u tahay ummadkasta oo ku nool dunida guudkeeda taa soo doonaysa in ay ka midho dhaliso himilada iyo hamiga ay leedahay. Adeegsiga nidaam maamul oo xalaal ahi waa dariiqa qudhaata ee ummadduhu ku horumaraan, marka ay doonayaan in ay ka biyo gaadhaan ujeedooyinka iyo aragtiyaha ay leeyihiin.
Waxaanay u kala horumaraan hadba sida ay u kala Dawlad wanaagsan yihiin iyo siday uga shaqaysiiyaan Caqliga iyo garashada uu Alle swt addoomahiisa siiyay. Umad waliba wixii ay Dawladnimda gashado ayuun bay ka goosataa. Haddii aad adigu tiin ka beerato, ha ka rajaynin in ay timiri kaaga soo go’ayso, haddii aad timir ka beeratana, ha ka rajaynin in uu tiin kaaga soo go’ayo.
Hadaba marka aan u soo noqdo u jeedada iyo nuxurka aan uga socdo maqaal-kaygan kooban waxa weeyaan inaan iftiimiyo sababaha ugu waa weyn ee lugta jiidaya habsami u socodka nidaamka doorshooyinka, taa sooy inoo muuqato in aynaan wali ku niyadsamaan midhaha inooga soo baxay.
Waxay aniga doodaydu tahay in asalka mushkiladuhu ka unkamayaan hab-nololeedka bulshadeena iyo sida ay u fikirayso,.
Bulshadeenu waxay ku abtirsanaa dhaqanka reer guuraaga, kaasoo xili aad u dheer aynu ku soo noolaayeen, waana sabab ka mid ah sababaha maanta dabada ka riixaya dareenka Qabyaaladeed ee dhulkeena ku baahay. Waxa uu dareenka Qabyaaladdu inaga weeciyay tubtii aynu ku gaadhi lahayn himilooyinka iyo humaaga aynu higsanayno. Waxa uu dareenka Qabyaalddu uu meesha ka saaray in hogaamiyaha la dooranayo loo eego astaamihii lagu dooran lahaa hogaamiye Qaran iyo Nin hiraale leh.
Haddii aynu si kale u dhigno waxa Qarannimadeena dhaawaca ku hayaa waa afkaarta Qabyaaladda, taa soo aynu odhan karno way ku xididaysatay Bulshada dhexdeeda.
Soomaalidu waxay ku maahmaahdaa “Hal xaaraan ahi, Nirig xalaala ma dhasho.” Haddii dariiqa aynu wax ku dooranaynaa yahay mid khaldan, midhaha ka soo baxaana noqon maayaan kuwa ina farax galiya, waana ta keentay in masuulkii aynu shalay dooranay hadana maanta ka niyad-jabsanahay.
Marka ugu horaysaba waxaynu wax ku dooranaa waa dariiqooyin khaldan oo aan ahayn, kuwii ay guulaha ku gaadheen dadyowgii inooga horeeyay Nidaamkan aynu qaadanay.
Tusaale ahaan, marka aynu dooranayno xildhibaan baarlamaan ama ku gole deegaan, waxaynu ku bilawnaa laba talaabo oo khaldan.Waa ta koobaade xildhabaan kasta oo la dooranayo waxa uu ku yimaadaa magac qabiil iyo cod Qabiil, halkii ay ka ahayd in uu ku yimaado cod Gobol ama ku Dagmo.
Waa ta labaade, Xildhibaan kasta oo Qabiil wato laguma soo xulo karti iyo aqoon hogaamineed oo uu leeyahay, ee waxa kaliyaatee ee logu soo xulaa waa in uu buuxiyo saami-qaybsiga reerka dhexdiisa, islamarkaa kuwan soo xulayaana malaha aragti Qaran iyo dareen ummaddeed ee waxa qudhaatee u muuqdaa waa saamiga reerka ay horboodayaan. Hadaba sida aynu ognahay ma jiraan adeegyo bulsho oo reer gooni u leeyahay, ku waa soo haddii ay jiri la haayeen lagula xisaabtami lahaa Xildhibaanka reerku doortay. Sidoo kale marka la dooranayo madaxweyne Qaran iyana waa la mid oo Qabyaalad ayaa saldhig u ah, waxa kaliya ee ay ku kala du wanyihiin waa heerka ay Qabyaaladdu taagan tahay, oo marna Jufooyinka yar yar ee hoose ayaa ku loolama, marna Qabiilooyinka waa weyn ayaa ku loolama kursiga Qaranka ugu sareeya.
Si kasta ha ahaatee doorashada noocana waxa laga dhaxlaa waa shacabka oo kala fogaata, Dawladnimada oo tamar-daraata, dhaqaalaha oo curyaama iyo baahida oo badata. Calaa kuli xaal waxaan bulshadeena kula talinayaa in aynu dagaal naf hurid ah la galno aafada Qabyaada ee wadankeena halakaysay si ay u badbaadino rajada inoo muuqataa. By Cumar Axmed Cali,camarhamad333@gmail.com, tel; 0634244802.